I-China Ukusetyenziswa kwe-Stainless Steel Strap Production kunye neFektri | UDaren
Inoluhlu olubanzi lwezicelo kumandla ombane kunye neenkqubo zonikezelo lwamandla. Izibonelelo zalo zibonisiwe kwi:
1. Iimveliso zeentsimbi zentsimbi ezingenasici ezingenanto azithintelwanga bubume kunye nobungakanani bento ekufuneka ibotshiwe;
2. Isakhiwo se-buckle esilula senza lula ukuntsokotha kwehupu yendabuko;
3. Ukusebenza kakuhle kokuqinisa kuqinisekisa ukhuseleko lwezinto ezibotshiweyo;
4. Intambo zentsimbi engenazintambo zizibophelelo ezichaseneyo nezinto ezinobushushu obuphezulu ukuqinisekisa imeko-bume entle kunye neemfuno zokukhusela umlilo;
Ukusetyenziswa kweqhina lentambo yentsimbi kushishino lweemoto:
1. Iipaneli zokuvala izinto kwimibhobho yokukhupha imoto. Ukusetyenziswa kweentambo zentambo endaweni yendlela yendabuko yokuwelda kuthintela imeko yoxinzelelo lokophula indawo yokuwelda ngenxa yokwanda kobushushu. Yandisa ubomi bebhodi yokugquma ubushushu kunye nokuphucula ukuthembeka. Indlela elula yokufaka inciphisa iindleko zombhobho wokukhupha.
2. Isikhuselo sothuli seshaftini yemoto. Iimveliso zeentsimbi zentsimbi ezingenasici zinelungelo lokungalinganiselwa ngokobungakanani, nto leyo inciphisa uluhlu lwezinto ezakhiwe ngenxa yobungakanani obahlukeneyo beshishini elivelisa iidrive shafts. Isakhiwo esilula kunye namandla aphakamileyo athembekileyo anika intsebenzo elungileyo kwisigqubuthelo sethuli se-drive shaft.
3. Ibhasi eyaphukileyo. Iimveliso zentambo zentsimbi ezingenasici ziqinisekisa ukuthembeka kwebhasi yokuqhekeza imoto kunye nentsimbi yentsimbi eyimbumba eyahlukileyo. Ngelo xesha umphezulu webhasi ukhuselekile kumonakalo.
4. ingxowa yomoya. Ekulungisweni kwee-airbags zemoto, ukusebenza okuqinisekileyo kweebhegi zomoya kuqinisekisiwe.
5. Isetyenziswa ekufakweni kwamanzi kwimoto kunye nakwimibhobho yokuphuma kunye nemibhobho yomoya, intambo yentsimbi engenasici iqinisekisa ukutywina, ukhuseleko kunye nokuthembeka kombhobho ngokuqina kwayo.
Ukugqwesa kweemveliso zentambo zentsimbi engenasici kumasipala kunye neempawu zomqondiso:
1. Ayikhawulelwanga kubume bomphezulu kunye nobungakanani bento ekufuneka ibotshiwe;
2. Ukusebenza kakuhle kokuqinisa kuqinisekisa uzinzo kunye nokhuseleko lomqondiso;
3. Ubume obulula kunye nokubopha amandla aphezulu kunciphisa iindleko zolawulo lukamasipala;
4. Ukukhethwa kwezinto ezenziwe ngentsimbi engenasici kwenza ubuhle bendalo esingqongileyo nolawulo lukamasipala;
Intambo yeentambo ezingenasici ezingenanto zisetyenziswa kakhulu kumacandelo ohlukeneyo eshishini. Iintambo zeshishini, imibhobho yemizi-mveliso, imiqondiso yeefektri, iinqaba zamanzi zorhwebo kunye neminye imiba emininzi zisebenza kakuhle.
1. Iimveliso zeentsimbi zentsimbi ezingenasici zibonelela ngeemveliso ze-304SS, 201SS, 316SS, 317L, i-Monel kunye nezinye izinto ukuqinisekisa iimfuno ezizodwa zeshishini lokuchasana nokubola kunye nokukhusela umlilo;
2. Ukuqina kokuqina kokusebenza kuqinisekisa ukhuseleko kwimveliso yoshishino;
3. Indlela elula yofakelo ibonelela ngokulula kufakelo lweshishini, iphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi, kwaye ibonelela ngokhuseleko kulawulo olungxamisekileyo.
4. Intambo yentambo ye-stainless steel tie-proof kunye ne-anti-corrosion coating iqinisekisa ukhuseleko lweentambo zeshishini. Igalelo kwi
Ukukhuthaza imveliso ekhuselekileyo kunye nokukhusela okusingqongileyo
Iimveliso zeentsimbi zentsimbi ezingenasici zibonisa uncedo olomeleleyo kushishino lwemibhobho.
1.Ingaba iyinyanda imibhobho yayo nayiphi na ubukhulu;
2. Uyilo lweebhakethi ezizodwa lunokutywinwa kakuhle kwindawo yokubopha, kuqinisekisa ulungelelwaniso loxinzelelo kwiluphu yonke yeetayi;
3. Ubungakanani bephepha lombhobho osele lukhethwe luphucula ukusebenza kofakelo lombhobho;
4. Ukunciphisa uluhlu lwempahla yamasango, imibhobho yamaphepha amisiweyo anokuhlanganisa nayiphi na imibhobho encinci kunesayizi yayo;
5. Izixhobo ezisebenza ngokukuko zombane kunye nezixhobo zomoya, kunye noyilo loxinzelelo olunokuhlengahlengiswa luqinisekisa uxinizelelo kunye nokuzinza kofakelo.
Isetyenziswa ngokubanzi ekuqiniseni kweentambo zonxibelelwano zangaphakathi kunye neentambo zonxibelelwano zangaphandle.
1. Intambo yentambo ye-stainless steel tie iqinisekisa ukhuseleko lwentambo yonxibelelwano ngokuqina kwayo;
2. Intambo yentsimbi engenasici engenanto igcina indawo yolwandiso lwentambo, eqinisekisa ukuqina okunokuthenjwa kwaye kwangaxeshanye iqinisekisa ukuba umphezulu awukrwatshwanga;
3. Uyilo olwahlukileyo nolunelungelo elilodwa lokuyilwa komlilo luqinisekisa ukusebenza komlilo kunye nokhuseleko kwintambo.
Kwiimfuno ezizodwa kwicandelo lokuhamba ngenqwelomoya, intambo zentsimbi engenaqhina intambo zinomsebenzi obalaseleyo.
1. Intambo ezinokuthenjwa zentambo zentsimbi ezinokuthenjwa ziqinisekisa ukhuseleko lweentambo zenqwelomoya kwiindawo ezibi;
2. Ukukhethwa kwezinto ezingacimiyo kuyahlangabezana neemfuno zeshishini lokubhabha ngenqwelo moya;
3. Uyilo olukhethekileyo lokukhuselwa kwentambo luqinisekisa umphezulu wentambo ngelixa uqinisekisa ukuba intambo ibanjiwe;
4. Izibophelelo zentsimbi ezingenasici ezingenanto zenza ithuba elihle kwimibhobho yeoyile yokuhamba ngenqwelomoya kunye nemibhobho yomoya.